नेकपा (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकियो : के-के भए निर्णय ? - Supadeuralionline::सुपादेउराली अनलाइन
नेकपा (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकियो : के-के भए निर्णय ?
काठमाडौं, १३ मंसीर। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय कमिटीको बैठक सकिएको छ। दिउँसो १ बजेबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठक भर्खरै सकिएको हो।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बैठकमा ओली र प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भए पनि सचिवालयका सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि समय दिइएको छ।
नेकपाको सचिवालयको अर्को बैठक मंसीर १६ गते बस्नेछ। १६ गते बस्ने बैठकमा सचिवालय सदस्यहरुले ओली र प्रचण्डले पेश गरेका प्रस्तावमाथि बिस्तारमा आफ्नो धारणा राख्नेछन्। सचिवालयका नेताहरुलाई अध्ययनको निम्ति १६ गतेसम्मको समय दिइएको हो।